Madaxweyne Gaas Oo Booqanaya Gaalkacyo Iyo Dadkii Ku Dhaawacmay Qaraxyada Oo Dibadda Loo Qaadayo – Goobjoog News
Maanta oo Talaado ah ayaa lagu wadaa in waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug uu booqdo madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas halkaasi oo maalin kahor ay ka dhaceen qaraxyo khasaare geystay.
Gaas ayaa safar dibadda ah ku maqnaa markii qaraxyada ay ka dhacayeen magaalada Gaalkacyo, waxaana markii uu halkaasi tago kormeeri doonaa dadkii ay waxyeellada soo gaartay iyo sidoo kale meelihii ay qaraxyada ka dhaceen.
Dhanka kale diyaarad gaar ah ayaa lagu wadaa in magaalada Gaalkacyo ay ka qaaddo dhaawacyada daran ee dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay Gaalkacyo.
Saraakiisha caafimaadka Gaalkacyo qaarkood waxay inoo xaqiijiyeen in dadka qaar loo qaadi doono dalka Itoobiya, qaarkoona laga yaabo in la keeno magaalada Muqdisho.
Madaxwayne ku xigeenka Maamulka Puntland Inijneer Camey oo shalay booqday Gaalkacyo ayaa sheegay in Magaalada sida ugu dhaqsiyaha badan looga qaadayo dadka dhaawacyadooda daran yihiin.
“Wasiirka Amniga Ha Is Caliso” Sidaasi Waxaa Yiri…
Oylhcm trjgva cialis best place to buy cialis online
Widzoa nuhmro how much does cialis cost cialis dosage 40 mg
Etpmed jcmbgm Buy cheap viagra buy generic cialis online
Iydeiv tpepth Cialis samples online canadian pharmacy
Khudbadaha Murashaxiinta Guddoonka Aqalka Sare Oo Goordhaw Bilaabanaya